Fihaonana ny mpihaino mivantana - Mpilalao, mpilalao, mpankafy - raha izao no izy - NAB Nasehony ny vaovao amin'ny Broadcast Beat. Mpanolotra ofisialin'ny NAB Show, mpamokatra ny NAB Show LIVE
Home » News » Fihaonana ny mpihaino mivantana - Mpilalao, mpilalao, mpankafy - raha izao no izy
Fihaonana ny mpihaino mivantana - Mpilalao, mpilalao, mpankafy - raha izao no izy
"Fantatrao fa mbola tsy nihaona tamin'ireo lehilahy ireo aho. Noho izany, tsy maintsy hilaza ny anarako ianao, ary amin'izay dia ho fantatro hoe iza no milalao ny ekipa. "- Bud Costello, "Ireo taona fahasivy, "Universal Pictures, 1945
Talohan'ny nanapahantsika ny tady, dia nanontany tena isika raha toa ka very ny sangisangy (sy ny mpanatrika) angamba ny baolina kitra sy ny golf noho ny fahitana azy. Etsy ankilany, nanana baolina dimy izahay, baolina baseball, baolina kitra sy NASCAR, ary koa lakandranon'i golf roa tao anaty fonosanay lehibe fa tsy ny rehetra no tena mpankafy fanatanjahantena ... sa tsy izany?
Okay, Super Bowl (tia ny dokam-barotra) ary ny fahatongavan'ireo tigra avy any Tiger Woods mba handresy amin'ny fifaninanana lehibe iray taorian'ny fisintahana sotro main'ny dimy taona dia be dia be saingy tsy hafa kosa.
Ao amin'ny IBC, nisy ny fientanentanana indray momba ny fampielezam-peo amin'ny fampielezam-peo sy ny fahafahana vaovao amin'ny vaovao, noho ny firoboroboan'ny OTT mijery ny OTT.
Football, baolina kitra, baolina kitra, lalao baolina, lalao mavitrika ao amin'ny mpitantana ny tamba-jotra, satria navotsotra izy ireo, nitondran'izy ireo dolara goavana be ary mihoatra noho ny anjara birikiny amin'ny eyeballs.
Game Rehash - Raha ny adihevitra momba ny rano amin'izao fotoana izao ny hariva farany na ny lalao / hetsika omaly dia efa virtoaly amin'izao fotoana izao, mbola mahafinaritra loatra ny miresaka momba ny fifaninanana ary mamerina ny lalao.
Avy eo dia nisy ny vidin'ny PPV (salantsalalan'ny vidim-piainana) ultra-tombony, fiarahamonim-borona ary fandaharana ady.
Saingy ny fanatanjahantena toy ny mpitaingina bisikileta, baolina, bala, cricket, lacrosse, skateboarding, drone / hotrod racing, ary ny horde ny fanatanjahantena nika dia navela hiditra ao amin'ny YouTube. Na, raha sambatra izy ireo, ho tafiditra ao amin'ny ESPN +, Hulu Live na Amazon's library library.
Saingy araka ny filazan'i Allan McLennan, Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny PADEM Media Group, ekipa, ligy, tambajotra fahitalavitra, orinasa nomerika sy mpilalao dia mitady fomba vaovao hifandraisana amin'ireo mpankafy maneran-tany miaraka amin'ny OTT.
"Ny fehezan-dalàna mifehy ny IP dia manendry safidy vaovao ho an'ny MVPD amin'ny alàlan'ny famelana azy hanolotra mivantana ny horonan-tsary mivantana amin'ny mpihaino azy", hoy McLennan. "Manome tombontsoa ny vola miditra izy ireo; ary ny tena zava-dehibe dia ny fifandraisana akaiky kokoa amin'ny mpanjifa.
"Ny mpanohana, ny ekipa ary ny atleta dia afaka mifantoka amin'ny fandefasana ny traikefa tsara indrindra mety ho ara-ekonomika kokoa," nanamafy izy. "Ary amin'ny fotoana iray, ny vahaolana vaovao dia afaka manaisotra ny asa tsy ara-dalàna amin'ny fivarotana votoaty mendrika.
"Ny teknolojia dia efa matotra, ary betsaka kokoa no ampiasaina amin'izao fotoana izao," nanohy izy. "Ny votoatin'ny fanatanjahantena momba ny IP dia mety ho tsara kokoa, feno kokoa ary amin'ny fomba maro kokoa mandray anjara kokoa noho ny TV taloha. Fanendrena TV dia manana tantara 50 taona; ary ao anatin'ny taona vitsy monja, ny fifamoivoizana IP dia efa manetsika ny tohatra mba hanomezana izay tian'ny mpijery - ny fidirana mivantana eo amin'ny sehatra na fitaovana tiany. Ny fanalahidy dia hampiditra sy hametraka izany amin'ny fomba izay mifanaraka amin'ny mpankafy ary tsy manakorontana azy ireo noho ireo safidy. "
Noho ny famokarana ambany kokoa sy ny fahafahana manitatra ny fampielezana, misy ny fiantombohana ny fahalianana amin'ny Sports ary ny eSports dia mahatratra ny mpijery azy manokana sy ny mpihaino tsy mitsaha-mitombo.
Ary satria samy manana mpihaino tsara (na inona na inona no fanatanjahantena), dia afaka manome lanja kokoa ireo mpanohana vaovao izy ireo ary amin'ny tranga maro, fanohanana ad (ie, fidiram-bola).
Ad Shift - Rehefa miova ny mpanjifa, dia toy izany koa ny dokam-barotra. Mihamaro tokoa, ny fivarotana dia manova ny votoaty ho azon'ny olona amin'ny finday misy finday izay mitaky fomba vaovao sy fifanakalozan-kevitra mba hisarihana ny sain'ny mpijery.
Ny tatitry ny Limelight vao haingana dia nahatsikaritra fa ny 60 isan-jaton'ny mpanjifa eran-tany dia te-hijery (ary handoa izany) fanatanjahantena an-tserasera raha toa ka azo antoka fa ankafiziny ao amin'ny efitranon'ny safidiny izy ireo raha tsy mijery ny faharetana, ny buffering, na ny olana hafa.
Mpandraharaha amin'ny banky mandoa vola bebe kokoa noho ny tadin-koditra. Mihoatra ny antsasakadiny (59 isan-jato) no manoratra amin'ny lahatsary iray farafahakeliny (VOD) fara-fahakeliny.
Mpandray anjara amin'ny Cable dia manome fahitalavitra nentim-paharazana amin'ny horonantsary an-tserasera, mandoa ny serivisy 1.2 mivantana, raha tsy mampiasa ny 0.7 serivisy ny mpanjifa.
Ny arivo taona dia mitarika ny fiovana manerantany mankany amin'ny horonantsary an-tserasera. Ireo mpitsikera taona 18-35 dia mijery horonantsary an-tserasera kokoa noho ny fandaharana. Tanora arivo taona (taona 18-25) dia mandinika adiny sivy ora-13 minitra amin'ny horonantsary an-tserasera isan-kerinandro, raha oharina amin'ny ora adiny, 11 minitra fahita mahazatra. Ny 15 isan-jaton'ny tanora arivo taona dia mandany mihoatra ny ora 20 isan-kerinandro mijery lahatsary an-tserasera.
Ireo mpanjifany dia hanafoana ny tolotr'izy ireo noho ny fitomboan'ny vidiny. Mihoatra ny antsasakadiny (55 isan-jato) ny mpanjifa eran-tany no milaza fa ny vidim-bidy no antony voalohany hanafoanana ny fanompoana SVOD. Efa ho ny antsasany (46 isan-jato) no manamarika izany ho an'ny fametahana cable.
Ny fandaharana amin'ny aterineto dia manerana ny firenena. Ny mpijery ao Filipina dia mijery ny lahatsary indrindra amin'ny aterineto amin'ny valo ora, minitra 46 isan-kerinandro, manaraka akaiky akaiky an'i India sy i Etazonia amin'ny adiny valo sy tapany mijery ny herinandro. Alemana dia manana ny vidiny ambany indrindra amin'ny aterineto amin'ny aterineto mandritra ny dimy ora, roa minitra.
Araka ny filazan'i McLennan, ny fanatanjahantena mivantana sy ny angona angona (fitaovana marobe) dia sasantsasany amin'ireo sokajy haingana indrindra amin'ny fampielezam-baovao.
Noho ny fahaverezan'ny fizaham-bokin'ny CDNs (tambajotram-piterahana) ary ny Internet sy Wi-Fi dia misy, maro ireo fanatanjahan-tena vaovao no mandinika ny fananganana ny sehatr'izy ireo manokana amin'ny fisehoan-javatra, ny fahitana ara-tantara sy ny ambangovangony / Lisitry ny votoatiny matanjaka.
OTT Bandwidth - Raha te hihaona amin'ny fanirian'ny fanjifana amin'ny mpanjifa amin'ny fahitalavitra amin'ny OTT, ATSC sy SMPTE dia namolavola ny fenitra vaovao izay hanome ny votoatin'ny lahatsary maimaim-poana sy mahomby kokoa amin'ny DTC. Mba hanangonana bebe kokoa ny mpanjifa mpijery finday, dia namorona ny 5G ny telcos izay hanomezany ny fahaizan'ny bandwidth kokoa amin'ny fijerena ireo drafitra momba ny angona sy ny Wi-Fi.
HD, UHD, video ary fanatanjahantena 4K / HDR dia efa niely isan'andro miaraka amin'ny valiny tena tsara.
Ankoatra izany, McLennan, iray amin'ireo olona voalohany indrindra tao amin'ny OTT sy ny tetikasa fandaharam-pampahalalam-baovao, dia nilaza, "SMPTE(Society of Motion Picture & Television Engineers) dia nanao asa tsara ho an'ny fanamafisana ny fenitry ny ATSC (Advanced TV System Systems) 3.0 izay natokana ho an'ny fampielezam-peo miaraka amin'ny fotoana iray ary mitondra maso ny olona an-tapitrisany.
"Nahavita asa tsara koa ny mpandrindra 5G mba hamaranana ny fenitry azy ireo ihany koa," Nampiany. "Afaka miaraka amin'ny tompon-trano sy ny mpanjifa izy ireo miaraka aminy ny fijerena azy ireo, indrindra ny fanatanjahan-dry zareo.
Tao amin'ny 2018 Mobile World Congress (MWC), telcos vao haingana no nanambara fa hanana teknolojia 5G alefa any amin'ny tsena 50. Raha ny marina dia nanokatra tsenambola efatra i Verizon tamin'ny volana lasa teo Ericsson fanombantombanana fa ny 10 + isan-jato amin'ny tsena iraisam-pirenena dia mety 5G-navotsotry ny 2020.
"Ny roa dia hanome sehatra matanjaka ho an'ny haingam-pandeha haingana indrindra," hoy McLennan.
"Sinclair, Pearl ary iraka iraisam-pirenena iraisam-pirenena dia efa nanolotra ny serivisy ATSC miaraka amin'ny valim-bavaka lehibe ary maro no efa nomanina ho amin'ny famoahana ity taona ity sy manaraka." hoy izy
Toriteny baolina - Amin'ny fidirana ankapobeny amin'ny aterineto sy ny tambajotra finday dia mihamitombo haingana sy mivoatra, ny mpanjifa dia afaka mankafy kokoa ny fialam-boly am-pilaminana, vaovao ary fanatanjahantena raha tsy misy ny kodiarana mahafaty mahatsiravina.
Fotoana tsy navela, ny horonam-peo manapotipotika, ny feo avy amin'ny sync miaraka amin'ny hetsika, ny votoaty tonga amin'ny 1-5 segondra eo amin'ny efijery olon-kafa, alohan'ny ahitanao fa anisan'ireo fanamby goavana indrindra manoloana ny indostrian'ny horonan-tsary - faharetana.
Ny ambany kokoa ny faratampony, ny tsara kokoa ny traikefa amin'ny mpijery, ny afa-po kokoa ny mpanjifa ary ny tsy dia mahagaga fa ny mpankafy ara-panatanjahantena dia hanindry ny fanidiana na hanova ny serivisy.
Ny CDN sy ny mpamatsy rehetra / mpamatsy rehetra dia mifantoka amin'ny fiezahana hanafaka ny fahombiazan'ny fahaleovan-tena (akaiky zero) HD, Votoaty UHD sy 4K / HDR.
Manao izany tsy tapaka sy azo itokisana izy ireo ... ary amin'ny teknolojia vaovao, dia mbola ho tsara kokoa izany!
Codec Enhancements - Maro ny fanatsarana natao mba hanokafana ny teknolojia encoder / decoder sy ny fitantanana azy mba ahafahana mizara OTA fizarana lahatsary avo lenta toy ny hetsika fanatanjahan-tena 4K / HDR, ary koa ny fandefasana bandwidth hafa ho an'ny fijerena hafa, fijerena sy fifanakalozan-kevitra.
Ireo vahaolana kodin'ny fanjakana, indrindra ireo vahaolana tahaka ny V-Nova sy Bitmovin, ATME ary ny hafa, dia efa ampiasaina hanohanana ireo endrika fanatanjahantena ara-panatanjahantena toy ny HD, Ultra HD 4K, ary 360 VR.
Manohana ny HLS ihany koa izy ireo (HTTP Live Streaming), HEVC (High Efficiency Video Coding) sy MPEG-DASH (Dynamic Adaptive Streaming amin'ny HTTP).
Izy rehetra dia nihanitombo tamin'ny alàlan'ny HDR pikantsary vaovao avo lenta (matoky antsika, midika hoe mpilalao sarimihetsika amin'ny sarimihetsika rehetra).
Ny tanjona - manome ny traikefa ambaratonga ambaratonga rehetra amin'ireo fitaovam-pandefasana IP rehetra ary mitondra fiaramanidina lalindalina kokoa amin'ny fifandraisana eo amin'ny mpanjifa. Ny vahaolana toy ny Net Insight's Sye dia manjary mora kokoa ny mankafy ny hetsika mifototra amin'ny hetsika - hetsika eo amin'ny sehatra lehibe, sns / backgrounds amin'ny 2nd screen and texting / tweeting on the 3rd ny sary.
Multitask - Na dia mbola azo jerena ao amin'ny fahitalavitra aza ny "lalao lehibe", ny mpampiasa dia mampiasa ny sehatra hafa rehetra mba hanakalozana vaovao / vaovao momba ny hetsika ary na dia mahita fomba fijery samihafa sy ireo mpandray anjara aza. Ny votoatiny voaaro dia mampitombo ny vidiny ho an'ny mpanjifa ny franchise sy ny ekipa tsirairay.
Woody Woodhall, filohan 'ny Allied Post, no nameno ahy an-taonany maro lasa izay fa ny lahatsoratry ny sarimihetsika dia tena manan-danja, ary sarotra, endrika fanehoana sarimihetsika lehibe.
Angamba mbola manan-danja kokoa ho an'ireo olona izay te-ho tototra tanteraka amin'ny hetsika fanatanjahan-dry zareo.
Eo am-pamakiana azy, ny ampahany tsara indrindra amin'ny fanatanjahantena dia ny feo raha toa ka mahatsapa ny sinton'ny linebacker, ny mofomamy amin'ny futbol iray ao anaty aterineto, ny kibon'ny lozabe amin'ny baolina amin'ny tennis, ny fifandraisana amin'ny fiara roa NASCAR na ny lahatenin'ny fako LeBron sy Draymond.
Raha tsy misy feo, ny fanatanjahatena dia ... ho sangisangy!
Na Dolby Atmos izany na codec generic generic, dia ny HD, UHD, 3D na feo mitohy izay mitazona anao "amin'ny lalao."
Ny ampahany mahatsikaiky ao amin'ny lalao
Piracy - Ny fizarana tsy ara-dalàna, fizarana tsy ara-dalàna ny hetsika ara-panatanjahan-tena sy ny asa aman-draharaham-barotra ara-panatanjahantena, ny fisehoan-javatra ary ny ekipa mihoatra ny $ 9B isan-taona. Ankoatra izany, ny tranonkala pirate dia manome koa ny mpijery azy ireo manampy singa toy ny malware sy ny fangalarana ny maha-izy azy.
Ny ampahany ratsy indrindra amin'ny fanatanjahantena (sy ny votoatin'ny horonantsary) dia piramida.
Ny fiadiana ny amboara eran-tany amin'ny soccer any Rosia dia nanana stream piraty 2,637 ho an'ireo ampahany amin'ny Facebook, YouTube, Twitch, ary Periscope. Efa ho ny 30M sy ny streams 3,653 avy amin'ny endriny France-Croatia miaraka amin'ny fomba fijery 60M.
Io "fitotongana" (fitrandrahana tsy hita maso) ny fandaniana FIFA sy ireo izay miaro ara-dalàna an'arivony tapitrisa!
Eny, ireo tompon-jo manan-ka dia afaka mamaritra tsara ireo mpanao heloka bevava avy hatrany amin'ny adiresy IP, saingy ny lalàna dia mitaky ny tompon'ny zon'ny tompona handefa hafatra amin'ireo tranonkala, ary mangataka azy ireo hanala ireo horonan-tsary manevateva.
Soa ihany fa misy fitaovana toy ny nampidirin'ny NAGRA izay manana sehatra fiarovana matanjaka ary afaka miaro ireo mpilalao ara-panatanjahan-tena sy tompon-tserasera mialoha ny fitsarana.
"Ny fanatanjahantena ara-panatanjahan-tena dia mety handinika ny fisian'ny hetsi-panoherana tsy misy herisetra." Nanamarika i McLennan, "Saingy tsy marina izany amin'ny ambaratonga maro.
Theft - Ny tranonkala Pirate dia manolotra fandaniam-poana na "maimaim-poana" amin'ny hetsika ara-panatanjahan-tena manomboka ny World Cup, US Open, Super Bowl, Rose Bowl ary ny fifaninanana amin'ny lisea eny rehetra eny; Indraindray misy kalitao sy toetra tsy mendrika kokoa noho ny tompony, te-hanafaka ireo mpanohana.
"Ny olona izay tsy mahatsapa dia ny fahatsapany ho lehibe kokoa amin'ny fankafizana ilay fanatanjahantena", " Nanamafy i McLennan. "Ireo renirano tsy ara-dalàna ihany koa dia ahitana 'endri-javatra ankoatra ny malware, adiresy cybertheft sy ireo asa ratsy hafa izay mety hahatonga ny hetsika ara-panatanjahantena mora vidy."
Ny fahazoana manerantany ny fandrindrana sy ny teknolojia manerantany dia ahafahana mampitombo haingana ny votoaty avo lenta toy ny fanatanjahan-tena izay azo jerena amin'ny sehatra rehetra amin'ny fotoana rehetra na rehefa mora kokoa amin'ny mpankafy.
Mihamaro tokoa, manana fanatanjahan-tena ara-panatanjahan-tena, mpanohana ary atleta manana fitaovana maivana sy vahaolana azo atao mba hanolorana lozisialy eo an-toerana sy eo an-toerana, eo an-toerana sy eo an-toerana.
Efa hitantsika fa ireo mpankafy ara-panatanjahan-tena dia lasa mpanaraka ny serivisy mivantana mivantana ary mazoto mpijery, interactive.
Ary ny traikefa ara-panatanjahan-tena lalindalina kokoa dia mitombo hatrany ho an'ny mpanjifa mivantana.
Ny fanatanjahantena ara-panatanjahantena lehibe indrindra, ny tsy fahampian-tsakafo sy ny nosy dia mihamitombo hatrany ny fananganana feon'ny marika miavaka ary hamaly ireo mpankafy sy mpankafy mpankafy.
Amin'ny alàlan'ny digital OTT, ny mpijery dia afaka mamaky mora kokoa amin'ny votoatin'ny votoaty izay voafetra ihany amin'ny fijerin'ny fiarahamonina - raha mbola tsy sarotra aminy izany.
Avy eo, nandresy ny rehetra!
Tsy misy olona maniry hijery ny torolàlana haverina aminy raha toa ka nanao an'i Bud izy, "Tahaka anao ihany! Toy izany koa ianareo! Manipy ilay baolina amin'ny hoe Iza. Na iza na iza mametraka ny baolina sy ilay bandy dia mihodina ho faharoa. Iza no maka ny baolina ary manipy azy amin'izay. Inona no mitarika azy io tsy fantatro. Tsy fantatro ny mamerina azy indray amin'ny Tomorrow, Triple play. Olona iray hafa indray mitsangana ary hitsoaka baolina lava lava mankany Satria. Nahoana? Tsy fantatro! Izy no fahatelo ary tsy manome alahelo aho! "
Filoha at Marken Communications
Andy no Tompon'ny sy ny Filohan'ny Marken Fifandraisana Inc. ny Marketing sy ny Fifandraisana Consultante, miorina ao San Francisco faritra tamin'ny volana Aogositra 1977 ho Present.Marken Communications dia fanompoana manontolo fahafahana misafidy izay concentrates amin'ny raharaham-barotra / tsena drafitra, toerany, fampandrosoana, sy ny fifandraisana . Ny taona 30 fahafahana misafidy dia tafiditra tamin'ny malalaka orinasa isan-karazany sy ny varotra asa. Experience ahitana stratejika sy ny tsena fanaovana drafitra sy ny famonoana ho faty amin'ny fifandraisana sy ny Internet orinasa anisan'izany AT & T sy ny CERFnet ary koa ao amin'ny fitahirizana, fitehirizana fitantanana sy ny horonan-tsary vahaolana amin'ny orinasa anisan'izany Philips, InterVideo, Ulead, OWC, NewerTech, Sonic, Corel, Matsushita, Pinnacle, Dazzle , Cyberlink, Mountain Computer, Nikon, Plasmon, NTI, ADS Tech, Verbatim, Mitsubishi sy Panasonic.
Posts by Andy farany Marken (jereo rehetra)
Fihaonana ny mpihaino mivantana - Mpilalao, mpilalao, mpankafy - raha izao no izy - Novambra 7, 2018
Ny fitoviana, toy ny horonan-tsary lehibe, dia mitaky ny fitandremana amin'ny antsipiriany rehetra - Oktobra 31, 2018
Ny Evolisiona M & E dia manampy ny Indostrian'ny Tantara momba ny Tantara - Oktobra 17, 2018
fampitana injeniera fampitana Engineering fandraisana anjara isovideo, viarte, HDR, tabataba fampihenana, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, bitrate fampihenana, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw OTT SoftAtHome, MStar, CES2017 Spears & Arrows fanadihadiana, Digital Nirvana, fanarahamaso ny media, IBC TV Technology Ultra HD Forum Video injeniera virtoaly zava-misy	2018-11-07
Previous: FANAZAVANA AN'I FREESPEAK II FAMPIHAVANANA MANDRAKARIVA TAMIN'NY LASAN'I ED SHEERAN 'TOUR
Next: FilmLight manazava ny fanoloran-tena amin'ny fiaraha-monina Japoney amin'ny Inter BEE 2018
Hey Buddy !, Nahita ity fampahalalana ity ho anao aho: "Fihaonana mivantana - ekipa, mpilalao, mpankafy - raha izao no misy". Ity ny tranonkala: https://www.broadcastbeat.com/engaging-live-audience-teams-players-fans-want-it-now/. Misaotra anao.